Ogaden News Agency (ONA) – Sanadguuradii 34aad Ee JWXO oo Xagardheere Lagu Dhigay & Mas’uuliyiin Kenyan Ah oo Kasoo Qayb Galay.
Sanadguuradii 34aad Ee JWXO oo Xagardheere Lagu Dhigay & Mas’uuliyiin Kenyan Ah oo Kasoo Qayb Galay.
Waxaa hada si habsami leh kusoo dhamaaday xaflad balaadhan oo lagu maamuusayay sanadguurada 34aad ee kasoo wareegtay aas-aaskii Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO, waxayna xafladu kaqabsoontay xerada qoxootiga Xagardheere ee deegaanka Faafi.
Xafladan oo ahayd mid aan nooceeda horaan loogu qabanin xeryaha qoxootiga ayaa lagu casuumay madax katirsan dowlada Kenya iyo waliba masuuliyiin katirsan Jabhada ONLF.
Sidoo kale waxaa xaflada kasoo qayb galay bulshada Xagardheere oo aan kala hadhin, waxaana xaflada siqiruxbadan dadka ugu soodhawaynayay mas’uuliyiinta faraca Iftin oo u carbisan howlaha halganka.
Waxaa ugu horaynba xaflada furay gudoomiyaha Faraca Iftin Halgame Xaaji Cabdicasiis Nuur wuxuuna dadwaynaha ka hor akhriyay qodobada maanta lagusoo qaadan doono isagoo umahad celiyay mas’uuliyiinta iyo bulshada.
Intaas kadib waxaa lagu soo dhaweeyay kooxda Kacaan si ay bulshada dhiigooda udhaqaajiyeen madasha kusoo bandhigeen suugaan kala duwan oo Heestii Calanka Ogadenia ay ugu horayso.
Sidoo kale waxaa lagu soodhaweeyay gudoomiyaha Dagmada Faafi oo sibuuxda wakiil uga ahaa dowlada, wuxuuna gudoomiyuhu soojeediyay khudbad micno wayn xambaarsanayd isagoo taageero umuujiyay shacabka Soomaalida Ogadenia.
Waxaa sidoo kale madasha khudbado xogwaran iyo dhiirigalin isugu jiray soojeediyay Naftii hure Axmed Gadhcase iyo Naftii hure Cabdixakiin Jugle oo labaduba kamid ahaa maxaabiistii ONLf ee lagu hayay Bayaxoow, waxayna Naftood hurayaashu badaleen jawigii shirka.
Waxaan meesha kamaqnayn kaalintii odayaasha waxaana xaflada kahadlay odayaal aad ubadan oo isugu jia salaadiin iyo nabadoono waxayna odayaashu taageero hiil iyo hoo ah lagarab istaageen shacabka dulman ee Soomaalida Ogadenia.
Guntii iyo gunaanadkii waxaa sinabad galiyo ah kusoo dhamaatay xafladii maanta oo aysan bahda saxaafadu kamaqnayn, waxaana fikirkooda dhiibtay dadwayne aad ubadan.